အရေပြားကို ကြွက်သားနဲ့ ကော်နည်း စတိုင်လ်ကျသော အမျိုးသားများ
Alicia tomero | 28/05/2022 10:28 | ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှု, fit, အသုံးပြုနိုင်မှု, အစာအာဟာရ, ကျန်းမာခြင်း
အစားအသောက်တော်တော်များများဟာ ညာဘက်ခြေဖဝါးပေါ်ကနေစပြီး ရလဒ်တွေက အရမ်းကျေနပ်စရာကောင်းပါတယ်။ သို့သော် ကိုယ်အလေးချိန် အလွန်ကျနေပါက၊ ဖြစ်နိုင်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်က ငါတို့လိုချင်တဲ့ပုံစံကို မရဘူး။. အရေပြားသည် လျော့မသွားသောကြောင့် ခန္ဓာကိုယ် ပျက်သွားနိုင်ပြီး ဤဆောင်းပါးတွင် အကြံဉာဏ်အချို့ ပေးနိုင်ပါသည်။ အရေပြားကို ကြွက်သားမှာ ဘယ်လိုကပ်ရမလဲ။
အရေပြားလျော့ရဲ ပြင်းထန်စွာ ပါးလွှာပြီးနောက်တွင် အရေပြားပိုလျှံနေခြင်း ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ဒီလိုလျော့ရဲတာကို အဆုံးသတ်ဖို့ဆိုတာ လွယ်ကူတဲ့အလုပ်မဟုတ်သလို တိကျတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ စေတနာအများကြီးထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အလွန်ပြင်းထန်သော သို့မဟုတ် ကိုယ်ဝန်ရှိစဥ်အချိန်များတွင် ဤအချက်သည် အစားအသောက်များတွင် ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ဒီလိုကိစ္စတွေမှာ အမြဲလိုလို ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချဖို့ အကြံပြုထားပြီး ချက်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ၊ သို့မှသာ ခန္ဓာကိုယ်နှင့် အရေပြားတို့သည် ၎င်းတို့၏ ပုံသဏ္ဍာန်ကို သဘာဝအတိုင်း ကျေညက်စေသည်။
1 အရေပြားကို ကြွက်သားနဲ့ ကပ်နည်း ဒါမှမဟုတ် ပိုနေတဲ့ အရေပြားကို ရှောင်ပါ။
1.2 အသံတိုးဖို့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။
1.3 အသားအရေကို တင်းတင်းရင်းရင်းဖြစ်စေရန် ခရင်မ်များ
1.4 ပျော့ပျောင်းမှုအတွက် Hydrolyzed Collagen
အရေပြားကို ကြွက်သားနဲ့ ကပ်နည်း ဒါမှမဟုတ် ပိုနေတဲ့ အရေပြားကို ရှောင်ပါ။
ဒီလိုကိစ္စတွေမှာ ပုံမှန်ပါပဲ။ အရေပြားသည် ၎င်း၏ပုံသဏ္ဍာန်ကို ပြန်လည်ရရှိရန် အချိန်မရှိပါ။ အခြေအနေအသစ်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်အချိန်ယူရန်လိုအပ်သော်လည်း၊ များစွာသောအခြေအနေများတွင်တွဲလောင်းအရေပြားသည်ထိုနေရာတွင်တည်ရှိပြီးအမြဲတမ်းတပ်ဆင်နိုင်သည်။
အားလုံးမပြီးပါဘူး၊ လူတိုင်းမှာမဖြစ်ပါဘူး၊ ဒါကြောင့် လျော့ရဲတဲ့အသားအရေကို ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်လည်း မလွယ်ပါဘူး။
အ အစားအစာအာဟာရ ကူညီရန် အဓိကအရင်းအမြစ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ အရေပြား၏ elasticity နှင့်တင်းကျပ်မှုကိုပြန်လည်ကောင်းမွန်စေသည်။ အကောင်းဆုံး အစားအစာများ သည် ပါ၀င်သော အစားအစာများ ဖြစ်သည် ကော်လာဂျင်နှင့် အီလက်စတင်၏ ကောင်းသောအခြေခံ၊ မုန်လာဥနီ၊ ဆော်လမွန်၊ အခွံမာသီး၊ arugula၊ ကိုက်လန်၊ တို့ဟူးနဲ့ ပဲပိစပ်တို့မှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
ထပ်ထည့်ရမည့် အစားအစာများမှာ ပါ၀င်သော အစားအစာများဖြစ်သည်။ ဗီတာမင် C ပြီးတော့ အဲဒါကို လိမ္မော်သီး၊ ကီဝီသီးနဲ့ ဘရိုကိုလီလိုမျိုး ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေမှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဟိ ဗီတာမင် E ကို ၎င်းသည် အရေးကြီးပြီး အစေ့အဆန်များ၊ ဗာဒံစေ့များ၊ နေကြာဆီ နှင့် အစိမ်းရောင် အရွက်များ တွင် တွေ့ရှိနိုင်သည်။
သင်ဟာ တင်းကျပ်တဲ့ အစားအသောက်တွေကို လိုက်နာနေသေးတယ်ဆိုရင် ဒီအစားအစာတွေကို မမေ့သင့်ပါဘူး။ နေ့စဉ် အစားအစာ စားသုံးမှု၏ အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်သင့်သည်။ အသီးအနှံတွေ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ၊ ပရိုတင်းဓာတ်နဲ့ ပဲပင်တွေကို အစားအသောက်တွေကနေ မလွတ်သင့်ပါဘူး။ အခွံမာသီးများ၊ အဆီများသောငါး၊ သံလွင်ဆီနှင့် ထောပတ်သီးများသည် စားသုံးရန်အလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။ အရေပြားအတွက် ကောင်းမွန်သော အာဟာရ စည်းချက်။ ကြိုတင်ချက်ပြုတ်ထားသော အစားအစာများ သို့မဟုတ် စက်မှုကုန်ထုတ်မုန့်များ စားသုံးခြင်းမပြုရန် လုံးဝတားမြစ်ထားသည်။
အသားအရေကို တင်းရင်းစေဖို့ အကောင်းဆုံး လေ့ကျင့်ခန်းတွေပါ။ အလေးမလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။. အလေးမရတာ လူတိုင်းကြိုက်တဲ့ အရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိထားပြီးသားဖြစ်ပြီး ကြွက်သားသိပ်မလှချင်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေလည်း နည်းပါတယ်။ သို့သော် ဤလေ့ကျင့်ခန်းအမျိုးအစားသည် အကောင်းဆုံးအသုံးချနိုင်သည်။ လျော့ရဲသောအသားအရေအတွက်။
လူတော်တော်များများ လှည့်ကြည့်တယ်။ ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချရန်အတွက် cardio လေ့ကျင့်ခန်း. ဒါတွေအားလုံးက မဆိုးပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် အဲဒါက မင်းကို ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေပြီး ကြွက်သားတွေကို တင်းမာအောင် မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာကို ထောက်ပြရမယ်။ အေရိုးဗစ်လေ့ကျင့်ခန်း ၎င်းသည် အရေပြားအခြေအနေကို ကောင်းမွန်စေပြီး သွေးလည်ပတ်မှုကိုလည်း အားကောင်းစေသည်။
အသားအရေကို တင်းတင်းရင်းရင်းဖြစ်စေရန် ခရင်မ်များ
ခရင်မ်များသည် အရေပြားအစိုဓာတ်ကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ကူညီပေးနိုင်သော်လည်း၊ miracle cream မရှိပါ။ အလုပ်အားလုံးကို လုပ်နိုင်တယ်။ ဟိ ရှားစောင်းလက်ပတ် ကြွယ်ဝသော ခရင်မ်များသည် အထူးကောင်းမွန်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းတို့တွင် ကြီးမားသော အစိုဓာတ်နှင့် ပြန်လည်ရှင်သန်နိုင်သော အာနိသင် ပါဝင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
နှိပ်နယ်ပေးခြင်းသည် တင်းရင်းစေသော နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ နှင့်အရေပြား elasticity ။ အထူးခရင်မ်ကို နေ့စဥ် ညင်သာစွာနှိပ်နယ်ပေးခြင်းသည် ကောင်းသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် တစ်ပတ်ကို အနည်းဆုံး နှစ်ကြိမ် ပြင်းပြင်းထန်ထန် နှိပ်နယ်ပေးရင် လုံလောက်ပါပြီ။
ပျော့ပျောင်းမှုအတွက် Hydrolyzed Collagen
ကြွယ်ဝသောအစားအစာ Collagen ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာတွေက အကောင်းဆုံး၊ ဒါပေမယ့် hydrolyzed collagen ရဲ့ ပံ့ပိုးမှုက အရေပြားမှာရှိတဲ့ အရေးအကြောင်းတွေ ပေါ်လာတာ၊ ခြောက်သွေ့တာ၊ အရေပြားတစ်သျှူးတွေ ပျော့ပြောင်းလာတာ စတဲ့ အချက်များစွာကို ကူညီပေးမှာဖြစ်ပြီး အကျိုးဆက်အနေနဲ့ အသားအရေကို ထုထည်အများကြီးပိုရစေမှာပါ။
ဤဖြည့်စွက်အားယူခြင်း။ ၎င်းသည် elastin နှင့် fibrillin ထုတ်လုပ်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။ ဒါဟာ ရေဓာတ်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်တာကြောင့် အရေးအကြောင်းတွေ ပျော့ပျောင်းမှုမရှိတဲ့ အသားအရေအတွက် သော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ပိုမိုပြင်းထန်သော အခြေအနေများတွင်၊ ဤနည်းလမ်းများသည် ပေါ့ပါးသောနေရာတွင်၊ ၎င်းတို့ကဲ့သို့သော နည်းလမ်းကို အသုံးပြုနိုင်သည့် အလယ်ဗဟိုတွင် ခိုလှုံခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ la လျှပ်စစ်မီး. ဤနည်းလမ်းသည် အထူးသဖြင့် ဝမ်းဗိုက်၊ တင်ပါး၊ ပေါင်နှင့် လက်မောင်းတို့တွင် ပျော့ညံ့မှုကို ကူညီပေးသည်။
LPG နှိပ်နယ်ပေးခြင်း သူတို့လည်း ထူးချွန်တယ်။ ၎င်းတွင် ခံနိုင်ရည်ရှိသော အဆီများကို ထုတ်လွှတ်ပေးပြီး အသားအရေကို တင်းမာစေရန် ကူညီပေးသည့် စက်ပြင်တစ်ရှူးများကို ဆုပ်နယ်ပေးသည့် စက်တစ်ခု ပါဝင်ပါသည်။ သူ၏ကုသမှုသည် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသီးသန့်ဖြစ်ပြီး ရလဒ်ကောင်းများရှိသည်။
နောက်ဆုံး နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချတဲ့ အစားအသောက်တွေကို ထိန်းထားဖို့ အရေးကြီးတဲ့ အချက်များစွာကို မီးမောင်းထိုးပြရပါမယ်။ ဖြစ်ရမယ်။ ရေများများသောက်ပြီး ပရိုတင်းဓာတ်ကို တိုးစေပါတယ်။ နေ့စဉ်လေ့ကျင့်ခန်းတွင် ကြွက်သားများကို ပြန်လည်အတည်ပြုရန်။
လုပ်တာက ပိုကောင်းပါတယ်။ အလေးမလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။ အသံထွက်စေရန်နှင့် အစားအသောက်များတွင် ထည့်သွင်းပါ။ ကော်လာဂျင်နှင့် အီလက်စတင် ကြွယ်ဝသော အစားအစာများ. ကယ်လိုရီလောင်ကျွမ်းမှုအတွက် နေ့စဥ်လေ့ကျင့်ခန်းသည် စံပြကောင်းဖြစ်သော်လည်း ကိုယ်အလေးချိန်များခြင်းအပြင် အကြံဉာဏ်အချို့ကို ရယူလိုပါက လေ့ကျင့်နိုင်ပါသည်။ ကြိုးကိုနေ့စဉ် 15 မိနစ်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှု » အရေပြားကို ကြွက်သားနဲ့ ကပ်နည်း